UThula Bopela – The Ulwazi Programme
UThula Bopela unguSihlalo woMkhandlu Wenhlangano i-PSIRA olawula imboni yezokuphepha ezimele eNingizimu Afrika.
Ngesikhathi eseyinsizwa ekuqaleni kweminyaka yama-1960, uBopela wadela iphupho lakhe lobuntwana lokuba ngummeli, ukulandela umsebenzi wakhe njengendoda yamaZulu yokuba yiqhawe elilwa nobandlululo. Wajoyina umzabalazo wenkululeko, ezigabeni zoMkhonto weSizwe ngo-1963. Ngonyaka olandelayo wathunyelwa ukuqeqeshwa kwezempi e-Ukraine. Waqeqeshwa njengongoti wezikhali, lapho aphumelela khona phezulu ekilasini lakhe. Ngo-1967, uBopela wayeyingxenye yeqembu labashokobezi be-MK elabanjwa, laquliswa futhi lagwetshwa intambo e-Salisbury High Court. Ngemuva kweminyaka emibili ese-Death Row, isigwebo sakhe sancishiswa sanikwa iminyaka engu-13 ejele waze wakhululwa uMugabe ngo-1980. Wathola umfundaze e-World University eKenya lapho athola khona iziqu zakhe ze-Sociology / Anthropology ngo-Cum Laude. Kamuva wabuyela eNingizimu Afrika evela ekudingisweni kwakhe e-Netherlands futhi waqala umsebenzi wobumbano ngempumelelo.
UMnumzane Bopela noDaluxolo Luthuli washicilela Umkhonto weSizwe, “Fighting for a Divided People”, incwadi yokuqala eyabhalwa ngamadoda alwa njengabashokobezi nabebutho lenkululeko e-Southern Africa. UBopela ubhale izindatshana eziningi zepolitiki ngemicimbi yezenhlalo eNingizimu Afrika. Usebenzisa ulwazi lwakhe olunzulu nokuhlangenwe nakho kwakhe ukukhuthaza ingxoxo ezinhlakeni zeqembu elibusayo, ikakhulukazi phakathi kwamaqabane asemancane.
Categories People Tags Thula Bopela